Hankii Chelsea ee booska afaraad oo god mugdi sii galay kaddib guul daro ay kala kulantay kooxda Everton+Sawiro – Gool FM
( Premier League ) 17 Marso 2019 Kooxda Everton ayaa guul daro xanuun badan biday kooxda Chelsea kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League kaddib markii ay kaga adkaadeen ( 2-0).
Qeebtii koowaad ee kulan ciyaareedka kooxah Everton iyo Chelsea ayaa ku dhamaaday bar-baro gool la’aan ah wallow kooxda Bules oo marti aheyd ay ku gacan sareysay qeebtii koowaad ee ciyaarta .
Kulan ciyareedka qeebtiisa koowaad labada kooxodba waxaa soo maray fursado dhowr ah balse midna kama aysan faa ideysan in ay fursadhaas gool u badalaan .
Gabi ahaan qeebtii koowaad ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaaday bareejo , ciyaartoyda labada koox ayaana u huleelay qolka labiska si ay u soo qataan nasiino iyo talooyin wax ku ool ah .
Muddo kaddib waxaa dib loo anaba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta kooxda Everton oo ku ciyaareysay garoonkeeda ayaana la timid goolka koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey xidiga reer barazil ee Richarlison daqiiqadii 49-aad ee ciyaarta .
Kooxda Bules xaalka ayaa ku sii xumaaday kaddib markii laga dhaliyey gool kale oo labaad oo rigoore ahaa waxaana u dhaliyey Gylfi Sigurdsson daqaqiidii 72-aad ciyaarta kaddib qalad uu Alonso ku galay Richarlison.
Bules ayaa lumisay shan dhibcood oo kulankan iyo kulankii ka horeeyey ee Premier Leageu waxaan mugdi weyn galay booskooda afaraad iyo in ay u tartami karaa madaama Arsenal ay heysato fursad ka weyn fursadaha ay heestaan kooxaha Manchester United iyo Chelsea .
Ugu dambeen kulan ciyareedka ayaa ku dhamaaday 2-0 oo ay ku awood sheegatya kooxda Everton oo ku ciyaareysay garoonkeeda .
Kooxda Inter Milan oo guul muhiim ah ka gaartay dhigeeda Kooxda AC Milan +Sawiro